नेपालको नक्सा जारी गर्नुअघि भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने सरिता गिरी अब के गर्लिन् ? – Everest Pati
काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभागलाई नक्सामा समेट्दा नेपालको भूमि अब तीन सय १० वर्गकिलोमिटर बढ्नेछ।
सरकारले केही समयभित्रै हाल भारतीय फौज बसेको लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा राखेर जारी गर्ने जानकारी दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सो जानकारी दिएका हुन्।
नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेपछि सिंगो देशले स्वागत गरेको छ । तर, अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले नयाँ नक्साप्रति आलोचनात्मक ढंगले स्वागत गरेका छन्।
यतिबेला सो पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले अब के गर्छिन् ? भन्ने चासो देखिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गिरीले भनेकी थिइन्, ‘नेपालले नक्सा जारी गर्नुअघि भारतलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ भारतले नेपालको लिपुलेकमा सडक बनाउँदा चुइँक्क नबोल्ने गिरीले सांसदहरूले नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि उनी क्षुब्ध बनेकी थिइन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नक्सा पारित गरेपछि गिरीको अभव्यिक्ति आएको छैन । सबैले अब उनी के गर्लिन् भनेर प्रतीक्षा गरेका छन् । गिरीले संविधान बनाउने बेला नेपालको नाम नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । निलाम्बर आचार्य संयोजक रहेको संवैधानिक तथा राजनीतिक समितिमा गिरीले सो प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन एमाले नेता भीम रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । गिरीको जन्म भारतमा भएको हो । उनी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाली नागरिकता लिएकी हुन्।